ओली र महतोको मिलनले प्रदेश सरकारमा हलचल - Jhilko
काठमाडौं । नेपालको राजनीति खासगरी मधेसमा चर्चित नाम हो, राजेन्द्र महतो । कहिले के फण्डा र कहिले के हथकण्डा गर्न माहिर महतो नेपालको राजनीतिमा विवादित नेता हुन । राष्ट्रियताको अभियान सञ्चालन गर्ने पुराना बामपन्थी नेता साध्यबहादुर भण्डारीले महतोको नागरिकताको विषयमा रोचक किस्सा सुनाउने गर्छन । भण्डारीका अनुसार महतोले नागरिकता लिएको धेरै वर्षपछि उनका वावुले नागरिकता लिएकोदेखि सम्पती खरीदसम्मका धेरै घटनामा विवादित पात्र हुन, महतो । नेपालमा बसेर विभिन्न सेवासुविधा लिएर राज्यको माथिल्लो पदमा पुगेका महतो सिधै भन्ने गर्छन, नेपालको फलानो विषयमा भारतको यस्तो धारणा छ, त्यसभन्दा यताउता जाने होइन । यदि भारतले भनेको भन्दा फरक भएमा म त्यसको पक्षमा छैन।
सायद त्यही भएर होला, रुक्माङ्गत कटवाल काण्डको कारण राजीनामा दिएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउने प्रयास गर्दा धेरैले हटाउनुस भनेरपछि मेरो साथ छाडेका थिए । तर महतोले दश पटक सोंच्नुस र छिमेकीदेखि सबैसँग सल्लाह गर्नुस म भने हटाउने पक्षमा छैन भनेर स्पष्ट अभिब्यक्ति दिएका थिए ।’ भारतले नाकावन्दी लगाउँदा त्यसको वकालत गर्ने पहिलो पात्र थिए, महतो । पछि उनको माग पूरा भएपछि त्यसमा भारतको कुनै हात छैन भन्दै आफूले नाकाबन्दी गरेको बताउने महतो भारतमा जन्मी वयस्क भएपछि नेपाल आएर राजनीतिमा राम्रै सफलता प्राप्त गर्ने पात्र हुन ।
भारतमा जन्मेको कारण मात्र होइन, नेपालको भारत निर्भरतालाई राम्रोसँग बुझेकै कारण उनी विना हिच्किचाहट भारतको वकालत गर्छन । विवादित र स्पष्ट अभिव्यक्तिका लागि परिचित महतो नेपालको राजनीतिमा भारतीय योजना कार्यान्वयन गर्ने पात्र हुन भन्दा फरक नपर्ला । उनलाई नजिकबाट चिनेका व्यक्तिहरुका अनुसार कतिपय मधेसी र पहाडी मुलका नेताहरु भित्री रुपमा भारतीय योजना लागू गर्न तयार छन् र त्यसै अनुरुप हिंडिरहेका छन । तर महतो अरुजस्तो ‘कम्बल ओढेर घ्यु खाने’ पात्र होइनन्, जे हुन स्पष्ट छन् । मधेसी समुदायलाई भारतीय देख्ने पहाडी मुलका तथाकथित व्यक्तिहरुसँगै धेरैको तारोमा पर्छन, महतो ।
सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर उनको उछितो काढ्छन । कुनै पीडितको फोटो भेटेमा महतोको घरमा काम गर्ने युवती भन्दै सामाजिक सञ्जाल भर्ने जमातले महतोको घर भन्दै अरुकै घर राखेको लगायतका उदाहरण पनि छन् । कुनै राजेन्द्र महतो नामका व्यक्तिको नागरिकता खारेज हुँदा उनलाई बोल्न वाध्य पार्ने गरी समाचार बनाइन्छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि विशेषगरी पार्टीको नेतृत्वमा आएपछि महतोले विवादको सामना गरिरहेका छन् र विवादको सामना गर्ने योजना तथा पूर्व तयारी अनुसार नै उनको अभिव्यक्ति आउने गरेको छ । देखिदा पहाडको विरोधमा लागेका महतो पहाडे समुदायसँग बिशेष सम्बन्ध बनाएर नेपालको राजनीतिमा टिक्ने दाउमा छन् भन्ने कुरा उनको छोराको विवाह काठमाडौंको रैथाने नेवार परिवारकी छोरीसँग गर्नुले पनि पुष्टि हुन्छ । जसले जे भने पद, पैसा र शक्ति प्राप्तिको लागि जे गर्दा हुन्छ, महतोले त्यही गरिरहेका छन् र उनको सक्रियता हेर्दा त्यही गर्ने छन् भन्न सकिन्छ ।
आलोचना र विवाद एवम् नाम र वदनामका बीचमा रहेर राजनीतिक सफलता हासिल गरेका, त्यही गर्नका लागि मानसिक रुपले तयार महतोको सक्रियता र राजनीतिक तिकडमबाजीको कला भने लोभलाग्दो छ । सायद त्यस्तो हुँदैन थियो भने सर्लाहीमा घर बनाएका महतोले जनकपुरमा गएर त्यहाँका रैथाने तथा हेभिवेट विमलेन्द्र निधीलाई हराएर संसदमा पुग्ने थिएनन् । वामपन्थी पृष्ठभूमिका र दक्षिणपन्थीभन्दा वामपन्थीसँग सहकार्य गर्ने समाजवादीका उपेन्द्र यादवलाई जिल खुवाउँदै नेकपासँग सहकार्य गर्ने सम्झौता गर्न सफल भएका छन, महतो । उनी जब जब राजपाको संयोजक हुन्छन, तब तब राजपा सक्रिय हुन्छ । महतोको सक्रियताकै कारण नेकपा र राजपाबीच दुई बुँदे सम्झौता भएको छ ।
सरकारमा रहेको र बारम्बार सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपासँग सहकार्य गर्न तयार छौं भन्ने समाजवादी पार्टीलाई छक्याउँदै महतोले नेकपासँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सम्झौता मात्र गरेका छैनन् भविष्यमा पनि सहकार्य गर्ने भनेर समाजवादीका नेताहरुको मथिङ्गल हल्लाएका छन् । सरकार छाडेमा समाजवादीसँग एकता गर्ने भनेर वार्ता गर्दै हिडेका महतो एक्कासी सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीसँग सहकार्य गर्न पुगेका छन् । नेकपासँगको सहमतिले राजपालाई खासै फाइदा छैन, गुमेका दुई राष्ट्रियसभा सदस्य विना मेहनत पुनः हांसिल भएको छ । तर नेकपालाई भने विगतमा गुमेको एक सांसद पदमा थप एक थपिने भएको छ । नेकपा र राजपाको सम्झौताले मधेसको मसिहा मान्ने उपेन्द्रलाई साइजमा ल्याउने र अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याउने काम गरेको छ भने राजपा र नेकपाबीचको सम्बन्ध सुधारको काम गरेको छ । सम्झौताले राजपाभन्दा नेकपालाई फाइदा पुगेको छ । एउटा उग्र प्रतिपक्ष सरकारसँग सहकार्य गर्न आइपुगेको छ भने एक सांसद थपिएको छ ।
कसरी सम्भव भयो सहकार्य ?
महतो नेतृत्वमा सञ्चालित मधेस आन्दोलनको तारोमा पर्ने राष्ट्रिय नेता हुन, प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली । सप्तरीमा राजपा कार्यकर्ताकै आक्रमणको कारण तत्कालीन नेकपा एमालेको अभियान स्थगित भएको थियो भने मधेस आन्दोलनकर्ताहरुले एमालेलाई मधेसविरोधी पार्टीको रुपमा चित्रण गरेका थिए । तर, दक्षिणपन्थीहरु जति उग्र भए पनि सत्ताभन्दा बाहिर बस्न सक्दैनन् र सत्तापक्षसँग सहकार्य गर्न लालायित हुन्छन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै महतोको नेतृत्वमा नेकपासँग सहकार्य भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि डा. सिके राउतसँग सम्झौता गरी एजेण्डा छोड्न बाध्य बनाउँदा जति सफलताको रुपमा चित्रित नभए पनि राजपासँगको सहकार्यलाई अनौठो भने मानिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पर्क सूत्रले महतोसँग निरन्तर वार्ता गरेको र भारतसँग नजिक हुनकै लागि यो सम्झौता गरेको बताउनेहरु पनि भेटिन्छन । सिधा अर्थमा नेकपालाई फाइदा भएकोले सम्झौता गरेको भन्न सकिए पनि यसभित्र धेरै कारण रहेकोमा कुनै सन्देह छैन ।
समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्नु हँुदैन भन्ने राजपाका नेता अनिल झाहरु सरकारसँग भित्रभित्रै वार्ता र छलफलमा थिए । झन् पछिल्लो चरणमा झालाई विराटनगर जुट मिलमा अनियमितता गरेको कारण अख्तियारले कारवाही गर्नुपर्छ भनेर छानविन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको अबस्थामा जे गरेर भए पनि सरकारसँग निकट हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा थिए, झा । तर उनले पनि थाहा नपाई रातारात महतोले सम्झौताको वातावरण बनाए र सम्झौता गरे । महतो र प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पर्क सूत्रबीच पटकपटक वार्ता भएकै कारण समाजवादीलाई सरकार छोडेर जा भन्ने आसय अनुरुप प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवकै मत्रालय परिवर्तन गरे । तर, यादव कुर्सीमा लिसो टाँसिए झै टाँसिइ कानुन मन्त्रालय सम्हालेर सरकारमा बसिरहेका छन् । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर २ मा मात्र नेकपाको सरकार छैन ।
अब राजपासँगको सहकार्यले प्रदेश नम्बर २ मा पनि नेकपा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन र त्यसअघि हुन लागेको सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचनले त्यसलाई बल पु¥याउनेछ । नेकपाले उपसभामुख छोड्नुपर्ने भएपछि सो पद राजपाले पाउने चर्चा चल्न थालेको छ । राजपा नेतृ चन्दा चौधरीलाई उपसभामुख बनाउने राजपाको प्रयास छ । उपसभामुख राजपाले पाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको विषयमा पनि छलफल हुने निश्चित छ ।
प्रदेश सरकार कस्तो ?
नेकपा र राजपाबीच भएको सहमतिपछि प्रदेश २ मा सत्ता समिकरणको विषय ठूलो बहसको विषय बनेको छ भने समाजवादी पार्टीका नेताहरु आत्तिएको अवस्थामा भेटिन थालेका छन् । कतिपयले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनको तयारीमा रहेको राजपाले संघीय सरकारको नेतृृत्व दल नेकपासँग गरेको सहमतिलाई स्वाभाविक रुपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसलाई प्रदेश २ सरकारको सत्ता समिकरणसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् । नेकपा र राजपाबीच पछिल्लो समय भएको सहमतिबाट प्रदेश २ का नेकपाका नेता मात्र होइन, राजपा र समाजवादीकै कतिपय नेताहरु अब प्रदेश २ सरकार परिवर्तनको सङ्घारमा पुगेको बताउन थालेका छन् ।
कुल एक सय सात सदस्य रहेको प्रदेश २ मा नेकपा ३३, समाजवादी पार्टी २९, राजपा २५, नेपाली कांग्रेस १९ र नेपाल समाजवादी पार्टीको एक सिट छ । नेकपा र राजपा मिल्दा ५८ सिट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश २ मा पनि नेकपाले मुख्यमन्त्री पाउन सक्ने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । यो सत्ता समिकरणका लागि पर्याप्त सिट हो । अहिले प्रदेश २ मा राजपाको सहभागिता र समर्थनमा समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश २ को सरकार र केन्द्र सरकारबीच बेलाबखत विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् । यसैबेला राजपा र नेकपाबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सहमतिले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण भएकोमा भने धेरै नेता सहमत देखिन्छन ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा त अन्य राजनीतिक दलले पनि सहकार्य गरिरहेकै छन् तर सहमतिमै सहकार्यको बुँदा उल्लेख गरिनुले राजपा र नेकपाबीच नयाँ ध्रुवीकरणको सङ्केत गरेको धेरैको बुझाइ छ । विगतमा नेकपासँग दुरी बढाएर प्रतिपक्षीको कित्तामा बस्दै आएको राजपा विस्तारै केन्द्र सरकारमा समेत सामेल हुने चाहना राखेर यस्तो सहमति गरेको हुनसक्ने आँकलन समेत गरिएको छ । मधेशको समान मुद्दा भए पनि समाजवादी पार्टी केन्द्र सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दै आएको छ । त्यसैले समाजवादी पार्टीलाई सत्ताबाट बाहिर ल्याउनका लागि नेकपासँग राजपाले सहमति गरेको हुनसक्ने अड्कलबाजी समेत हुने गरेको छ । लामो समयदेखि समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्न कस्सिएका राजपाका नेताहरु तत्काल एकता सम्भव नदेखेपछि नेकपासँग सहमति गर्न बाध्य भएको हुनसक्ने भन्नेहरु पनि कम छैनन् ।
अन्यौलमा प्रदेश २ सभाको बैठक
प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भन्ने यतिबेला प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको बिषय टुङ्गिसकेको हुन्थ्यो, तर यो विषय अझै अन्यौलमै छ । यतिसम्म कि प्रदेश २ सभाको बैठक कहिले बस्ने भन्ने कुरा नै अन्यौलमा छ । जसका कारण प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय अझै लम्बिने सम्भावना देखिन्छ । प्रदेश सभाका सदस्यहरुले गत वर्ष सञ्चालन गरेको योजनाहरुको भुक्तानी नभएको भन्दै सदन चल्न नदिएपछि प्रदेश सभाको बैठक यतिबेला अलपत्र परेको छ भने प्रदेशसभा सदस्यहरु रोजगारविहीन बनेका छन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा छनौट भएका योजनाहरुको अधिकांश भुक्तानी रोकिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले योजनाको भुक्तानी नपाएसम्म प्रदेशसभा बैठक बस्न नदिने अडान छन् ।
करिव दुई महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक अबरुद्ध हुदाँ समेत प्रदेश २ सरकार बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै स्वयम् सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रदेश सभाले आठ सय ४२ वटा योजनाको भुक्तानी दिने प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेकाले सो योजनाहरुको भुक्तानी दिनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले माग गर्दै आएका छन् । योजनाहरुको भुक्तानी नहुँदा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा जान समेत समस्या भइरहेकाले प्रदेश सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाइ छ ।
तर, प्रदेश सरकारले चाहेर पनि रकम सजिलै भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था देखिदैंन । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरु सम्बन्धी कागजातहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट आएका टोलीले लगेकाले सबै मन्त्रालयबाट फाइलका कपीहरु लगिएको कारण भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कर्मचारीहरु डराइरहेको स्रोतको दावी छ । लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार वर्षमा दुई पटक बैठक बस्ने चलन छ । तर, प्रदेश २ मा एक वर्षमा सदन निरन्तर १५ दिनसम्म चलेको छैन । यसरी लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्रदेशसभा वैठक सञ्चालन गर्न नसकेको असफल बनेको प्रदेश २ सरकारका अधिकांश क्रियाकलाप समेत विवादित बन्दै गएको छ । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाको सरकार बनेमा आश्चर्य हुँदैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
विद्युतीय रेलमार्गको ट्रयाक निर्माण अगाडी बढ्यो
श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोस्थित आर प्रेमादशा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आज...
चीन र भारतले इरानलाई परमाणु बम बनाउन रोक्ने सम्झौताको सुरक्षा...
अमेरिकाले नै इरानलाई परमाणु बम बनाउन रोक्ने गरी युरोपियन युनियनसँग मिलेर गरेको सम्झौताबाट...
ती व्यक्तिले श्रीमतीलाई बिजनेस मिटिङको बहाना बनाउदै ब्रिटेन पुगेका थिए । ब्रिटेन...
नेपालले पहिलोपटक सगरमाथाको उचाइ मापनमा सफलतापूर्वकरूपमा जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै...